नारी दिवसमा श्रीमान‍्लाई बोकेर यसरी दौडिए श्रीमती – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. नारी दिवसमा श्रीमान‍्लाई बोकेर यसरी दौडिए श्रीमती – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
नारी दिवसमा श्रीमान‍्लाई बोकेर यसरी दौडिए श्रीमती
१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित श्रीमतीले श्रीमान् बोकेर दौडिने कार्यक्रममा तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले आयोजना गरिएको हो । देवघाट–५ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयमा उक्त प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो । उक्त दौड एक सय मिटरको थियो । गाउँपालिकाले नारी दिवसका अवसरमा विविध कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । त्यसमध्ये श्रीमान् बोकेर दौडिने प्रतियोगिता नयाँखाले कार्यक्रम हो ।
महिला समाजका हरेक पक्षमा सबल रहेको देखाउनुको लागि यस प्रकारको प्रतियोगिता आयोजना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले बताए ।
श्रीमानलाई बोकेर दौडने भन्ने सुन्दा विष्णु अधिकारीलाई निकै अप्ठ्यारो लागेको थियो।
श्रीमानलाई उचालेकोसम्म अनुभव नभएकी उनका लागि यो विल्कुलै नौलो कुरा थियो। तर सोमबार उनी श्रीमान पदम अधिकारीलाई बोकेर कुँदिनन् मात्रै श्रीमतीले श्रीमान बोक्ने प्रतिस्पर्धीको विजेता नै बनिन्।
प्रतिस्पर्धीहरू देख्दा श्रीमान पदमलाई लागेको थियो अरु जोडी निकै तगडा छन्।
‘तर आफ्नै श्रीमती पो कडा निस्किइन्,’ उनले सुनाए।
तनुहँको देवघाट गाउँपालिकाले सोमबार नारी दिवसको अवसर पारेर श्रीमातीले श्रीमान बोकेर दौडने अनौठो प्रतिस्पर्धीको आयोजना गरेको थियो।
स्थानीय कालिका माविको प्रांगणमा गाउँपालिकाले एक सय मिटरको दूरीमा यस्तो प्रतिस्पर्धीको आयोजना गरेको थियो। प्रतिस्पर्धीमा २४ वर्षका युवादेखि ६५ वर्षीय वृद्धसम्म सहभागी भए।
विद्यालय नजिकै घर भएका ६५ वर्षीय बमबहादुर थापा क्षेत्रीलाई ४५ वर्षीया श्रीमती सीताले ढाडमा बोकिन्।
श्रीमान बोकेकी सीताले उमेरले आफू भन्दा साना र बलिया देखिनेप्रतिस्पर्धीलाई आत्थु–आत्थु पारिन्। यो जोडी प्रतिस्पर्धीकै तेस्रो बन्यो।
‘महिला दिवसका दिन महिलालाई खुसी बनाउनुपर्छ भनेर रमाइलोमा आएको,’ बमबहादुरले भने, ‘असाध्यै रमाइलो भयो।’
सीताले जीवनमै पहिलो पटक श्रीमानलाई बोकेर दौडदा असाध्यै खुसी लागेको बताइन्।
३ महिना अघिमात्रै पाठेघरको शल्यक्रिया गरेकी सीता सापकोटा स्वास्थ्यको प्रवाह पनि नगरी श्रीमान बोकेर मैदानमा पुगिन्।
‘रमाइलोसँगै महिला सक्षम छन् भन्ने एउटा सन्देश पनि जाओस् भन्ने लागेर स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुँदा पनि मैदानमा आयौं,’ उनले भनिन्।
दश जोडी सहभागी भएको प्रतिस्पर्धीमा श्रीमान नविनलाई बोकेकी गंगा गुरुङ दोस्रो भइन् भने भरतलाई बोकेर दौडिने श्रीमती उजेली चौथो भए।
‘देशमा महिला हिंसाका घटना बढिरहेको, महिलालाई अझै पनि घरबाट बाहिर जान रोकतोक रहने गरेको, सबै कुरामा सक्षम छैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ,’प्रतिस्पर्धी पदम अधिकारीले भने, ‘महिलाहरू सबै कुरामा सक्षम छन् भन्ने सांकेतिक प्रस्तुती यो प्रतिस्पर्धीले देखाएको छ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरू पुरूष जतिकै सबै क्रियाकलापमा सक्षम छन् भन्ने देखाउन मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धी आयोजना गरिएको बताए।
उनले पतिपत्नीबीचको सुमधुर र सौहार्द सम्बन्धको विकास गर्न पनि यस्तो प्रतिस्पर्धी गरिएको उनले बताए।
‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धीस्वरूप देशमा संविधान बन्यो र संविधानले सबैलाई समान भनेको छ तर त्यो स्थापित हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले यही कुरालाई सबैमाझ जानकारी गराउनका लागि पनि प्रतिस्पर्धी राखेका हौं।’
उनले आगामी वर्षदेखि यस कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाको नियमित तालिकामै राखेर थप व्यवस्थित तवरले प्रतिस्पर्धी आयोजना गर्ने बताए।
गाउँपालिकाले नारी दिवसको अवसरमा महिलाहरूको कुर्सी चाल प्रतियोगिता, गाउँपालिकाका सहायक कार्यकर्ताबीचको प्रतिभा प्रस्तुती कार्यक्रम पनि आयोजना गर्‍यो।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको March 8, 2021 March 8, 2021 280 Viewed